Miditra amin'ny Cross Media Optimization | Martech Zone
Asabotsy, Aprily 11, 2009 Talata, Oktobra 9, 2012 Douglas Karr
Nisy fivoriana vitsivitsy tao Konferansa Webtrends Engage 2009 izay niresaka ny herin'ny fampidirana data sy ny fiatraikany tsara amin'ny valin'ny orinasa. Orinasa maro no manomboka amin'ny famolavolana datamart goavambe ary avy eo dia mihemotra - manandrana mampiditra ny zava-drehetra ao amin'ny maodelin'izy ireo. Dingana tsy mandeha tsara izy io satria miova tsy tapaka ny fizotrany… tsy ho vitanao mihitsy ny hanatanteraka azy io satria miova izy raha vantany vao voafaritra.
Craig Macdonald, filoha lefitra zokiny ary tompon'andraikitra amin'ny marketing Covario, dia nanao topy maso tsara momba ny fomba hidirana amin'ny Cross Marketing Optimization. Nantsoina ny famelabelarana sy ny fivoriana The New CMO: Fanamafisana ny varotra. Craig dia tsy niresaka an-tsipiriany momba ny fantsona tsirairay sy ny fizotrany, koa hiezaka aho hanome antsipiriany fanampiny amin'ny fahitako ny fizotrany.
Ny fizotrany dia mihetsika manomboka amin'ny kely ka hatramin'ny lehibe fa tsy ny mifamadika amin'izay. Mizara roa ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa manerana ny fantsona, ny rafitra, ny fizotrany, sns. Ny fampidirana ny angon-drakitra ho an'ny datamart dia mitaky mailaka ny fampiharana ny tahiry… toa ny fananganana hazondamosina. Disika ny fantsona tsirairay. Ny kapila dia atambatra ho hazondamosina. Aorian'ny fametrahana ny hazondamosina dia azo ampiana taolana, avy eo ny hena amin'ny taolana, toy izay ny hoditra amin'ny hena, sns. Fampitahana lehibe, fantatro… fa mandeha io.
Ny famaritana ny dingana ao anatin'ny fantsona tsirairay no dingana voalohany. Ohatra iray amin'ny fizotry ny fantsona dia ireo dingana izay raisin'ny vinavina an-tserasera manomboka amin'ny fitadiavana ny orinasanao ka hatramin'ny fanovana, ny Channel an'ny Search Engine. Angamba izy ireo dia manomboka amin'ny motera fikarohana, avy eo miantsona amin'ny pejy iray, avy eo tsindrio raha hanisy entana ao anaty harona fiantsenana, avy eo famintinana kaody, avy eo pejy fanovana. Fahazoan-danja hahafantarana hoe inona ny motera fikarohana nahitana azy ireo…
Inona ireo teny lakile notadiavin'izy ireo?
Inona no nifototra tamin'ireo pejin-teny nifanaraka tamin'ireo teny lakile ireo?
Inona no tsindry azon'izy ireo hanampiana ilay entana ao anaty harona fiantsenana?
Niova fo ve izy ireo sa nahafoy?
Browser, Rafitra miasa, adiresy IP, sns.?
Ireo sombin-tahiry rehetra ireo dia manakiana amin'ny fanombatombanana ny dianao mba hahitanao ireo sombiny mahomby sy tsy mandaitra amin'ny lalana tsirairay. Ny singa rehetra na ny angon-drakitra meta azonao raisina momba ny dian'ny mpanjifa dia ilaina tokoa ka raiso ny zava-drehetra, na manao ahoana na manao ahoana tsy misy dikany. Raha vantany vao tafapetraka ny angon-drakitra, dia somary tsotra ny fanatsarana ny fantsona.
Raha vantany vao voafaritra, voasambotra ary namboarina ny dingana manokana tsirairay, ny fampifangaroana ny angon-drakitra no dingana manaraka. Ny fanamafisana ny angona dia ahafahan'ny orinasa mampitaha fantsona, ny fahombiazan'izy ireo ary ny tena zava-dehibe dia ny fiantraikan'ny fantsona iray amin'ny iray hafa. Moa ve mahafanina ny ezaka ataonao amin'ny fandanianao vola amin'ny karama isaky ny tsindry amin'ny teny lakile izay efa mandresy ara-nofo ianao? Ny fizotry ny fividiananao (tsy lafo) ve no mahatonga ny olona hiantso (lafo vidy) ny orinasanao fa tsy?
Ilaina ny fanatsarana ny haino aman-jery Cross raha maniry ny hitazona ny vidiny sy hiverina be ny orinasanao. Ezaka sarotra azo atao mandritra ny taona maro (ary miova tsy tapaka), fa rehefa tafapetraka ireo sombin-javatra dia azo raisina am-pitokisana ny fanapahan-kevitra. Tsy paikady ho an'ny orinasam-pandraharahana fotsiny izany, fa mety hanan-danja amin'ny orinasa kely koa.
Nanamarika i Craig fa ny orinasa dia manao tsinontsinona ny loharanom-pahalalana ilaina mba hahazoana tombony lehibe amin'ny fanatsarana ny haino aman-jery. Mino izy fa ~ 10% amin'ny vola laninao amin'ny marketing / IT dia tokony ampifandraisina amin'ny famakafakana sy ny fanatsarana. Pilina sarotra atelina izany raha tsy azonao averina io fandaniana io amin'ny famerenam-bola. Tsy misalasala aho fa azo atao izany, heveriko fa tranga akoho na atody fotsiny. Ahoana no hanamarinanao ny 10% raha tsy vitanao izany. Ahoana no anaovanao azy raha tsy mandany 10% ianao?
Angamba miditra amin'ny fampiasam-bola rehefa miditra amin'ilay dingana ianao no lakilena. Ny fanatsarana ny fantsona tokana dia mety hanome anao ny fiverenana ilaina hanitarana ny mpiasa sy ny enti-manana.
Tags: lakilasy fanatsarana fantsonafantsona marketing
Apr 11, 2009 ao amin'ny 10: PM PM
Tiavo ilay fampitahana Doug, tsy tena goavambe mihitsy, fomba tsara hieritreretana rafitra mirindra sy malefaka. Manaiky aho fa mandeha tsara. Manontany tena aho hoe firy ny mpivarotra no tena mieritreritra olana toy izao ankehitriny amin'ny toekarena ankehitriny? Tokony ho izy ireo, saingy noho ny antony maro samihafa dia heveriko fa tsy mifantoka loatra amin'izany izy ireo araka ny tokony ho izy. Mahaliana ny mpamaky hafa mba hisafidy ny fihetsika momba ny fandraisana ny tena fanatsarana ny haino aman-jery? Lahatsoratra tsara, zavatra mampieritreritra.
Apr 11, 2009 ao amin'ny 11: PM PM
Misaotra Chris! Mankasitraka anao mandalo. Te-hihaino amin'ny mpivarotra hafa koa aho! Nisy ohatra vitsivitsy tao amin'ny kaonferansa - na dia ao anatin'izany ny fampahalalam-baovao malalaka toy ny fahitalavitra sy ny gazety. Mila asa kely fotsiny ny fisamborana ireo fiovam-po ireo… na isa 1-800 manokana, kaody fihenam-bidy manokana, na mpanjifa tsy dia matoky firy.
Izay rehetra mety hataon'ny orinasa iray hanarahana ny fitarihana mialoha dia manan-danja amin'ny paikady ihany koa.